Posted by ဇနိ at 11:41 AM
khin oo may November 2, 2008 at 2:18 PM
ဟယ်။ မဇနိ က ချင်ခြင်းဖြစ်နေပြီဆိုဘဲ။
khin oo may November 2, 2008 at 2:19 PM
ထမင်းလေးက ဝဘူး။ ထပ်ထည့်ပေးပါ။ အများကြီး။
khin oo may November 2, 2008 at 2:20 PM
ဟင်းချိူလေးလုပ်ပါဗျိူ့။ရန်ကုန်သူ မှ ပွဲ တောင်းသည်။ ရန်ကုန်သူ များ အရည် မပါ မစားတတ် သကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ချဉ်ရည် သို့မဟုတ် ဟင်းချိူ အမြဲ ပါသည်။( မိဘ လက်ထက်တွင် ရှိ စဉ် ကဖြစ်သည်. KMSL လက်ထက်တွင် တော့ ထမင်းတောင် နပ် မမှန်ပါ.။ဟင်းချိူပါ ဘို့ နေနေ သာသာ။ )
khin oo may November 2, 2008 at 2:21 PM
သနားပါတယ် ကွယ်တို့ ။ နွဲ့ယဉ်ဝင်း သီချင်းလို့ ရွှေပင်လယ်ကြီး ခြားလို့ အမြန် ဆုံးနီးပါစေဗျာ။
( ကိုဇနိ ဘက် က ကျွန်တော် ပိုခံစားရတယ်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူ က မစားရတဲ့ သူ မို့လို့ပါ။ လွမ်းရတာချင်း အတူတူ.)
khin oo may November 2, 2008 at 2:22 PM
အရမ်းစားချင်တယ်။ အရမ်းစားချင်ပါတယ်ကွယ်။ ခရမ်းသီးကို ကျွတ်ကျွှတ် မြည်အောင် ကိုက်ဝါးစား နံနံပင် ကလေးကိုတို့။ ငပိချက်နဲ့ ထမင်းကို နယ်။ ပုန်းရည်ကြီးဝက်သားကို အရသာ ခံပြီး ပါးစပ်ထဲ မှာ တမြုံ့မြုံ့ဝါး။ ကောင်းလိုက်တာကွယ။် ဒီလိုမျှိူးဘယ်တော့စားရမလဲ။ရန် ကုန်ရောက်ရင် လိပ်စာပေးပါကွယ်။ ထမင်းစားချိန်နီးရင် လာလည်ချင်လို့ပါ။ “ဒန်ပေါက်ဝယ်လာပြီးလဲ စားပါ့မယ်။
သော်တာဆွေ ဝတ်ထုထဲ က လိုပေါ့။ သူ့သူငယ်ချင်း က ဒန်ပေါက်တွေဝယ်လာပြီး သော်တာဆွေ လင်မယားအပြင်သွားတုံးရောက်လာပြီး။ သု့မိန်းမ ချက်ထားတာတွေ အားလုံးစားသွားပြီး ဒန်ပေါက် ထားခဲ့တယ် ဆိုတာမှိူးပေါ့ကွယ်။
မဇနိကတော့ စိတ်ကောက်တော့မှာဘဲ အရှည်ကြီး ကို ဇနိကိုရေးတယ် ဆိုပြီး။ အစားနဲ့ မျှားတာကိုညီမရယ် အစ် မ က ဒါ မှူိး စိတ် မခိုင်ဘူး။
sin dan lar November 2, 2008 at 2:32 PM
ဟိဟိ..ကို/မဇနိရယ်..ခွဲနေရတဲ့ နိမောင်နှံကို ရီတာမဟုတ်ဘူးနော်
PAUK November 2, 2008 at 3:43 PM
ပေါက်အတွက် အသားကို မမကေအိုအမ်ကိုပဲပေးစားလိုက်ပါနော်..
၀ါဝါခိုင်မင်း November 2, 2008 at 4:15 PM
ဟီးဟီး ထမင်းလာစားတာ .. မမခင်ဦးမေ ရဲ့
ဟာဒရရွှင်ဆေးနဲ့ တိုးနေတယ်။ အဲဒီတော့
ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ ထမင်းတွေစားသွားပါတယ်.မဇနိ နဲ့ ကိုဇနိ တို့ရေ..း)
nu-san November 2, 2008 at 4:53 PM
မခင်ဦးမေ comment ထဲကလိုပေါ့... အမလည်း ထမင်းကို ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်နဲ့ နယ်ပြီး ခရမ်းကျွတ်သီးလေး တို့စားမလို့... ၀က်သားလည်းပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုဇနိလေး အလွမ်းသယ်တာ မြင်ရတော့ မစားရက်တော့ဘူး..သနားပါတယ်..... :(
Republic November 2, 2008 at 5:04 PM
မမကွိရေ ၊ မကြီးဂွိ ဘာတွေလာသောင်းကျန်းသွားတာလဲဗျ၊၊
ဗိုက်ဆာတယ်ဗျာ .. မမနိ ဟင်းချက်တဲ့ ပို့စ်တွေအားလုံးက ဟင်းတွေကို စားချင်တယ်၊၊ကိုနိ ကြီးရေ ..ကံကောင်းတယ်နော် ၊၊ မမကွိ က ဘက်စုံ တော်တယ်၊၊
ဝေလေး November 2, 2008 at 5:30 PM
စားချင်စရာပဲ.... ထမင်းဝင်စားသွားတယ်. နည်းနည်းပဲစားတာပါ. သိပ်မစားပါဘူး..... :P
ကိုဇနိနဲ့ မမဇနိ မြန်မြန်ပြန်ဆုံနိုင်ကြပါစေ...... :D
May Moe November 2, 2008 at 5:33 PM
ကိုနိ လာလဲမပြောဘူး :'( ကုန်ပြီလားမသိ ငပိချက်နဲ့ နံနံပင် တို့စားရတာကြိုက်တယ် ကိုနိ ၊မမနိ တို့အမြန်ဆုံးနီးပါစေနော်
Anonymous November 2, 2008 at 6:56 PM
ကိုနိ နဲ့မမနိ အ၀ါဟ ၀ိဝါဟ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် အဲ့လိုမျိုးအပြင်မှာတကယ်ကျွေးနော်း)
Moe Cho Thinn November 2, 2008 at 8:10 PM
ရော့ ရော့ ကိုနိပိုစားလိုက်..လွမ်းနေတာဆိုတော့။
အမ အတွက်ပါ ပိုစားလိုက်။ အမ မစားတော့ဘူးနော်..
လင်း November 3, 2008 at 12:22 PM
ဟင့် အကျန်လေးဘဲ ကပ်တီးသွားရတယ်။ မkom အကုန်တီးသွားလို့ ။ ခရမ်းကျွတ်သီးလဲမကျန်၊ ၀က်ပုန်းရည်လေးနည်းနည်းကျန်တာနဲ့ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက်လေးကို ကျန်လူးလေးထမင်းနဲ့လူး ပြီးဝါးတီးပေးသွားတယ်။ နောက်ပို့ စ်တွေ စားစရာမတင်ရလို့ အမိန့် ထုတ်ရမလို ဖြစ်နေပြီ။စားစရာတွေ ပြပြပြီးညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေပါတယ်ဗျို့ 
တန်ခူး November 3, 2008 at 3:23 PM
ပင်ပန်းပြီး အစားအသောက်ပျက်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ… ဇီးဖြူပုန်းရည်ဝက်သားလေးကလဲ ခံတွင်းတွေ့ … ခရမ်းကျွတ်သီးလေးကလဲ တို့ လို့ ကောင်း… ချက်ပေးတဲ့ ညီမလေးနိနိကိုလဲ ကျေးဇူး… ဝေမျှကျွေးတဲ့ မောင်လေးကိုဇနိကိုလဲ ကျေးဇူး… အမြန်နီးရပါစေလို့ ….
Heartmuseum November 5, 2008 at 1:31 AM
မKOMတို့ကတော့ မနိုင်ဘူး။ လွှတ်စားတော့တာပဲ။ နောက်လူအတွက် ချန်အုံးဗျ။ ဟီးးးးး